Waxaa la aaminsan yahay mid caadi ah in maskaxda aadanaha waa bartey madhan at dhalashada, iyo sida uu ilmuhu bilaabo inuu koro iyo hesho heshaa, ka neurons bilaabaan samaynta xidhiidhada. Science hadda helayo, Si kastaba ha ahaatee, in dambe waxaa laga yaabaa run. dhallaanka waxaa dhab dhashay badan xidhiidhada neuron ka badan dadka waaweyn ugu leeyihiin. Waxaa laga yaabaa in waxbarashada aanay dhicin by samaynta xidhiidhada neuron, laakiin halkii ay jaridda dhirta kuwa aan la isticmaali. Haddii ay taasi waa run, ka dibna waxaan ku dhan yihiin, macno ahaan, dhashay maskaxda cajiib ah oo waa in aan u isticmaalno ama waa lumin.
In ka toddobaad ee ugu horreeya nolosha, ilmaha ugu dhawaaqaan doonaa dhawaaq kasta oo macquul ah bilabo. Weli, carruurtan ka dib lumin doonaa awood u leh inay abuuraan dhawaaqyada aan qayb ka mid ah luqada ay la tababaray inay la hadlaan. Sidaa darteed, deegaanka ilmaha la ciyaari doonta kaalin wayn ee koritaanka maskaxda.
Ka dib halyeeyga ah tiradaasi asalka: qaybta Coronal kooban neuron ka joogto waxaad moodaysay pyramidal "Dow" (visualized by GFP cagaaran) ma jebiyo, waayo, reer Gebacna (visualized by xayd unugyada cas ee). xidhmooyin image Confocal, dahaadhaa ee channels GFP iyo reer Gebacna. bar Miisaanka: 100 μm (credit Photo: Wikipedia)
Seynisyahanno ku andacoodaan in bulshadeenna shaqsi celceliska isticmaalaa kaliya 5 – 10% oo ka mid ah maskaxda ee kara. Bal qiyaas waxa aad nolosha noqon kartaa sida haddii aad ay awoodaan in ay kicin aad maanka galay kaakicin xataa qayb yar oo ka iman kara in aan la isticmaalin!
Ku bilow naftaada waydiiso:
1. Haddii aan ku yeelan karto wax at dhan, waxa uu noqon lahaa?
2. Waxa aan u baahanahay lahaa in ay sameeyaan si ay u gaadhaan?
3. Maxaa iga joojiyo ka samaynaya waxyaabo kuwa hadda?
4. Sidee baan u gudbi karo caqabadaha kuwa ay u helaan nolosha, waxaan jeclahay?
Su'aalahani waxay naga soo guurto kaarto imagination iyo fikirka wanaagsan — tayada oo u oggolaan doonaa inaad toosin kale oo 90% iyo sii neurons kuwa rasaas!
Hadda waxaad dhihi kara naftaada si, II horay ay qaadato aragti wanaagsan, ama, laga yaabee in walax wanaagsan uma shaqeeyo — oo dhan waxaan u baahan tahay waa geyaan Laakiin bandhig soo socda cadeyneysaa in male fog tahay ka xoog badan geyaan weligood waxay noqon kartaa.
Okay, diyaar u ah imtixaanka? Urursada oo dhan ee aad xoog iyo “geyaan.” Lagu hubiyo in MA inay yeelaan halkan ka dib markii ay timaado HA qabaa of cas a firetruck!!
Waxaad si toos ah u maleeyay of firetruck cas, xaq u? Tani waa sababta marka waa doonistii iyo caasinimada in colaadda, caasinimada had iyo jeer ku guuleystay. Dadka intooda badan ku qaataan wax weyn oo waqti isu sheego waxa ay HA rabto, halkii waxa ay doonayaan HA.
Xitaa la ounce kasta oo awooddii ay u tartami karaan, waxay bartey aakhirka la badan oo wax la mid ah jirka.
Taas macneheedu maxaa yeelay maan ka shaqeeya sawirada, ayan erayadayda. Imagination waa qayb qarsoon oo nolosha. Haddii dadka naftooda hodan qiyaasi, iyadoo aan loo eegin xaddiga lacagta ay haystaan, waxaa jira fursad ay noqon doonaan caafimaad oo xoog badan oo ku nool nolol badan.
Haddii nin hodan ah imagines miskiin iska ama qarka u waayaan oo uu maal, waxay u badan tahay in dhibaato iyo cudur isaga cudurka daacuunka doonaa qabriga la.
All in aynu raadinaynaa nolosha hore u joogo gudaha nafaheena. The si degdeg ah aan iman in ay aaminsan yihiin in xoogga naga male gaar ah, fudud nolosheena noqon doonaa. Waxaan aad ka doodid si ay u fidin maskaxdaada si aad u macquul ah oo ah xirfad gaar ah oo ka baxsan hadafka aad wakhtigan xaadirka.
Maxaa dhacaya haddii, isagoo isku dayaya in ay gaaraan aad gool, aad toosay hanad qarsoon awood gudahood? Sideed dareemi lahayd haddii aad ka helay daawo u AIDS ama kansarka? Ka fakar dadka ka faa'iideysan lahaa ka guul.
Runtuna waxay tahay in ilaa qof kasta oo caalamka ku imagines adduunka ka mid ah caafimaadka iyo koboca ee dhammaan, waxaa mar walba noqon doonaa cudur iyo hoog. Qaado mas'uul ka ah nolosha haatan. Bal qiyaas aad hab caafimaad iyo farxad iyo saas noqon doonaa.
flash A of implants iftiin xusuus been ah ku jireen jiirarkii
Study: bayoolajiga dubaridi maskaxda mouse in galaha xusuus been ah
86770	70 maskaxda, Caafimaadka, maskaxda Human, Imagination, Mind, Neuron, Susumu Tonegawa, Iyadoo
← Dad lagu dilay dagaallo ka dhacay dibad-bax Morsi ee Masar Cabidda Coffee hoos u dhigi kartaa Khatarta ismiidaaminta! →